Globalkpụrụ na mmemme amụma mba ụwa niile 2016 Martech Zone
Tọzdee, Eprel 28, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Anyị edeela banyere ihe mgbasa ozi mmemme mbubreyo afọ gara aga ma mee nnukwu mkparịta ụka na ọkachamara Pete Kluge site na Adobe na isiokwu. Industrylọ ọrụ na-aga ngwa ngwa ngwa ngwa. Ejighi m n'aka sistemụ mgbasa ozi mgbasa ozi nke chọrọ ntinye aka maka njikarịcha ga-adịgide. N'ezie, a na-atụ anya ka mmefu mmemme mmemme ga-ewere 63% nke ahịa ngosi dijitalụ site na njedebe nke afọ a dị ka eMarketer.
Mkpokọta nke mgbasa ozi mgbasa ozi na teknụzụ ga-abawanye na 2016, yana ndị ahịa APAC na-achọpụta uru nke ịbelata nke ọma iji ruo ndị ziri ezi, yana mgbasa ozi ziri ezi, n'oge kwesịrị ekwesị.
Enwere m ike ịgbakwunye na sistemụ ndị a na-elekwasịkwa anya ebe ziri ezi na-elekwasị anya ma dị mkpa na ọdịdị ala.
Dika iru a na-agbasawanye na algorithms na-aga n’ihu na-eziwanye ezi, ahia mmemme bu ezigbo nnabata. Ike nke ndi ahia ka iwolite oru oma nke ahia ha karia a fesa ma kpee ekpere ịbịakwute ịzụta mgbasa ozi ga-enyere ụlọ ọrụ aka.
Ndị ahịa agaghị enwe ike igbochi mgbasa ozi ma ọ bụrụ na ha kwenyere na mgbasa ozi baara ha uru. Businesseslọ ọrụ achụmnta ego nwere ike ibelata ụgwọ maka ihe nnweta, ikekwe na-agbanwe mmefu ego na iguzosi ike n'ihe na njigide. Pịa na infographic maka igbe ọkụ ma ọ bụ budata ya Mgbasa ozi.
Tags: 2016ọnụ ọgụgụ mgbasa oziọnụ ọgụgụ mgbasa oziusoro mgbasa oziapacgosipụta ọnụ ọgụgụ mgbasa oziemealatamMgbasa oziamụma mmemmemmemme mmemmefesa ma kpee ekpereọnọdụ